बिहान आत्तिँदै फोन गरेकी साथीलाई फोन गरेँ; उठेन ! उसले सु’साइड गरिछे.. - Ebihani.com
उसले सु’साइड गरिछे।
मैले बिहान फोन उठाएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुराले सताइरह्यो। मैले पहिला जस्तै ‘होला’ भन्ने नसोचेकी भए के अहिलेको अवस्था फरक हुन्थ्यो? पछुतोले मलाई चिथोरिरह्यो।
अर्को दिन उसको घरको पेटीमा थ्याच्च बसेँ। साथीको मृत्युले मेरो मन शून्य थियो। स्तब्ध थिएँ। आसपासबाट उसले सुसाइड गर्नुका कारण धेरैले ‘होला’ मै दिँदै थिए।
ती सबै पनि मैले बिहान गरेजस्तै होलाको भरमा अनुमान गर्दै थिए। मैले ऊ जिउँदै हुँदा त्यही केही ‘होला’ सोचेर फोन उठाइनँ। उनीहरू ऊ मरिसकेपछि त्यसो गर्दै थिए। उनीहरू र म, हामी दुवैले उसलाई परबाट मात्र मूल्यांकन गरिरह्यौं।
त्यसपछि ‘होला’ का बारेमा झन् सोच्न थालेँ। दिनमा कति पटक होला भनेर कसैको अवस्थाबारे अनुमान लगाउँछु? होला भनेर कसैलाई कति नराम्रो सोच्छु? आजसम्म होला भएर गरिएका त्यस्ता अनुमानले कति सम्बन्धहरू बिगारेँ? कति पटक ‘होला’ लाई आधार बनाएर पछुताएँ?
सोच्दै जाँदा मैले सामान्य मानेको ‘होला’ त अझै ठूलो ठूलो हुँदै गयो। यो त मेरै वरपर सुतिरहेको मेरै बानी जस्तो रहेछ। यो त मैले अरूलाई बुझ्ने प्रयत्न गर्नुभन्दा बढी मैले अरूलाई सजिलै एउटा कुरामा सीमित गर्ने साधन जस्तो पो रहेछ। मैले जसलाई बुझ्न प्रयास गर्दिनँ, जसको नजिक जाने प्रयत्न गर्दिनँ वा सक्दिनँ, त्यसलाई परबाट हेर्ने मेरै आँखा पो रहेछ।
आफ्नो प्रिय साथी ‘माई स्टोरी’ मा घुमेको भिडिओ राखेर बिरामी भएर कोठामा सुतिरहेको हुन सक्छ। तर ‘मलाई नबोलाई घुम्न गयो’ भनेर रिसाइदिन सक्छौं।
कति पटक म दिक्क लागिरहेका बेला पुराना फोटो, भिडिओ पोष्ट गर्छु। हेर्नेलाई त ‘खुसी छे केटी’ लाग्न सक्छ। तर मैले राख्ने भिडिओ र फोटोलाई आधार बनाएर मलाई मूल्यांकन नगरिइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। त्यसमै रिप्लाई गरेर सोधे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ।
एक भारतीय फिल्म ‘पिंक’ सम्झिरहेकी छु। त्यहाँ सँगै रक्सी खान तयार भएकी युवती आफूसँग यौनसम्पर्क गर्न तयार भएको होला भन्ने बुझेर त्यसमा केही नसोची, हो नै भन्ने ठानेर एक पुरुष पात्रले महिला पात्रमाथि दुर्व्यवहार गर्न खोज्छ।
हाम्रो ‘होला’ को बढ्दो प्रयोग केवल शब्दमा सीमित कहाँ हुन्छ र? त्यही दृष्टिकोण अनुसार अरूलाई व्यवहार गर्छौं। त्यही व्यवहार अनुसार अरूबाट पनि व्यवहार आउँछ। अनि अरूबाट आएको व्यवहारमा पनि फेरि अनुमान लगाउँछौं।
‘होला’ लाई होला मात्र बन्न नदिएर ‘किन होला’ बनाउने बेला भएको छ।
‘होला’ लाई ‘के भएर होला’ बनाउने बेला भएको छ।
‘होला’ लाई टाढा राखेर ‘हो’ को नजिक पुग्ने बेला भएको छ।
अहिलेसम्म ‘होला’ को नियन्त्रणमा हामी छौं। अब ‘होला’ लाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने बेला भएको छ।
आजै सम्भव नहोला तर गर्न थाल्ने बेला भएको छ। क्रान्तिशिखा धिताल
Previous PostPrevious पत्नी ओली तिर, पति प्रचण्ड-नेपाल तिर यो दम्पतीको के भयो ?
Next PostNext रामकुमारी झाँक्री भन्छिन ‘म जतिबेला पनि मारिन सक्छु’